အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 125
သူဖုန်းစားတယောက်ရဲ့ သေတမ်းစာ ဆောင်းလူ စက်တင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၃ ငါ မရှိတော့ရင် မြွေရေခွံအိတ်ကွက်ကျားခင်းထားတဲ့ ကျောတခင်းစာကုို စည်ပင်က မသိမ်းမခြင်း ငါနဲ့ ဒုိုးတူဘောင်ဖက် တောင်းရမ်းစားခဲ့တဲ့ ငါ့မိန်းမက ရစေ …။ ငါပုိုင်ဆုိုင်တဲ့ တောင်းစားလက်နက် ခွက်အစုတ်ကုို အိပ်မက်မြင့်မြင့်မက်တတ်တဲ့ သားအကြီးက ရစေ …။ ပြည်တွင်းအရေး ပြည်ပအရေး .. အချိန်နဲ့တပြေးတည်း သိစေလုို့ တောင်းစားခွင်ကုို ချဲ့ထွင်နုိုင်ဖုို့ ငါ အမြဲနားဆင်တဲ့ ကက်ဆက်အစုတ်တလုံးပါ ရစေ ..။ သူတောင်းစားအဆောင်အယောင် ပတ်တီး .. ဆေးနဲ့ ချိုင်းဒေါက်တုို့အား သားအငယ်က ယူစေ …။ ဆထက်ထပုိုး အနာဂတ်အကျိုးအတွက် တောင်းစားနည်း ချဲ့ထွင် နုိုင်အောင် ငါကုိုယ်တုိုင် မှတ်တမ်းတင် တီထွင်ပြုစုထားတဲ့...
Zaw Aung (Mone Yar) – News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူရောက်လာတော့မည် ဇော်အောင် (မုံရွာ) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ သတင်းထွက်လာသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း George Yeo ဦးဆောင်သော၊ အစိုးရ EDB နှင့် Singapore Summit 2013 တွင်မိန့်ခွန်းပြောပါရန် ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလက်ခံပြီး၊ စင်ကာပူရောက်မြန်မာများနှင့်တွေ့ဆုံချင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် Singapore Summit မှ မြန်မာကလပ်ကို တရားဝင်ချဉ်းကပ်၊လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးသည်။ မြန်မာကလပ်မှာ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅၇ခုနှင့် ဆွေးနွေးညိနှုိင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ NLD တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် မြန်မာအလွှာပေါင်းစုံပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံပွဲကို လူဦးရေများများ တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရန်ဖြစ်သော်လည်း၊ စင်ကာပူအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဘောင်အတွင်းမှသာ လုပ်ဆောင်ရသည်။ မူလက NTU တက္ကသိုလ် လူဦးရေ၂၀၀၀ခန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်သော်လည်း မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် လူငါးထောင်ဆန့်သော Sentosa Resort...
အင်တါဗြူးခြင်း ဆောင်းလူ စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ မေး။ ။ အကုို ဘယ်လုိုဘယ်ပုံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးမှာ အခြေချဖြစ်ပုံလေးကုို ပြောပြပါဦး။ ဖြေ။ ။ အများသူငါလုို လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ဓာတ်ပုံအရုိုက်ခံလုိုက်မိတာက စတာပါပဲ …။ မေး။ ။ အော် ..ဒါနဲ့ … အခု ဘယ်လုိုစီးပွားတွေများ လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ …။ ဖြေ။ ။ အော် .. ဒါလား … ဗမာပြည်က ကုိုရာစနုိုးတုို့ … ရွှေပြည်နန်းတုို့ … ဒညင်းသီးတုို့ …ကြောင်ရှာသီးတုို့ .. ကွမ်းသီးတုို့ တင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းကုို လုပ်နေပါတယ်။ တချို့က နုိုင်ငံဂျားဖြစ်တွေကုို မကြိုက်ဘူးဗျ …။ မေး။ ။ အော် .....
သူတော င်းစားဆောင်းလူ စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ သူတောင်းစားတကောင် ငါ့အနားမှာ ယောင်တောင်တောင်နဲ့ ….။ ငါ့အိပ်ထောင်ထဲမှာက အကြွေဆိုလို့ တဆယ်တောင်မပြည့်ဘူး …။ မင်းမလဲ မင်းအပူနဲ့ ငါ့မလဲ ငါ့အပူနဲ့ …။ သူတောင်းစားတကောင် ငါ့အိပ်ထောင်ထဲက အကြွေကိုမှ မျက်စပစ်နေတယ်…။ မင်းမလဲ မင်းအပူနဲ့ ငါ့မလဲ ငါ့အပူနဲ့ …။ ငါ့အနား … ပေတူးလန် သူတောင်းစားတကောင်ကြောင့် …. ငါ့စိတ်တွေ နက်ခ်တိုင်စီးပြီး ကမ္ဘာပတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် …။ No tags for this post.
မြန်မာပြည်တွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း (6000 mW in5years by IPP SME) ဇော်အောင် (မုံရွာ) စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကာတွင် တရုပ်ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း အရှိန်ဟုန်စတင်ချိန်၊ လျှပ်စစ်မလုံလောက်မှုများ အကြီးအကျယ်အခက်ခဲတွေ့ရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံလည်း တရုပ်ပြည်နှင့်အပြိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲချိန်တွင် လျှပ်စစ်ပြသနာမှာ အဓိကဖြစ်နေသည်။ အခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာသာ လျှပ်စစ်လုံလောက်၊ မီးမပျက်၊ အခက်ခဲသိပ်မရှိလှသော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အင်ဒိုနီးရှား (လူဦးရေးသန်း၁၀၀၊ သန်း၂၀၀) နိုင်ငံကြီး၂ခုတွင် လျှပ်စစ်မီး၊ ခဏခဏပျက်သောကြောင့် အိုင်ပီပီ IPP Independent Power Provider များကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုပြုလုပ်စေခဲ့သည်။ တရုပ်နှင့်ဗီယက်နမ်တို့သည် နိုင်ငံခြားကုမဏီများနှင့်အစိုးရကုမဏီများ ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှတ်နှံစေသဖြင့် အနှစ်၂၀ကြာပြီး၊ ၂၀၁၃တွင် လျှပ်စစ်ပြသနာမကြီးလှ၊ တနည်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းမှာ တစ်ယူနစ်၊...
လူ့အသက်ထက် ပြင်းကြသော အရာများ ဖုိုးထက် စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ သတ္တ၀ါတွေထဲမှာ လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက အသက်အပြင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော် ဖတ်ဘူးတယ်။ သူ့ဘာသာ သဘာဝအရ အသက်ထွက်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ထွက်အောင် လုပ်ဖို့ အတော်ကြီး ခဲယဉ်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက ယဉ်တိုက်မှုတွေ၊ မတော်တဆမှုတွေကနေ အသက်ထွက်သွားတာကို ဆိုလိုဟန် မတူဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို သေစေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သတ်မယ်ဆိုရင် လူ့အသက်က ကျန်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေထက် အသက်ပြင်းတယ်လို့ ဆိုလိုဟန်တူတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လူကြီးသူမ အသက်ကြီးသူတွေက “သေမယ်ဆိုလဲဟယ် ခေါက်ခနဲ့ဘဲ သေချင်တယ်။ ရောဂါတွေ ခံစားမနေချင်ဘူး” လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင်တစ်ကောင်ကို သေအောင် သတ်ဖို့နဲ လူတစ်ယောက်ကို...
သတ္တိခဲအမျိုးသမီးကြီး နော်အုန်းလှ တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်) နော်အုန်းလှသည် ကင်မရာမီးရောင်တို့ ပြိုးပြက်သော စင်မြင့်ပေါ်က “ဒီမိုကရေစီကိုယ်ဟန်ပြမယ်” မဟုတ်။ နော်အုန်းလှသည် လက်ပံတောင်းတိုက်ပွဲခွင်မှ တိုက်ပွဲဝင် သတ္တိခဲအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မတရားမှု၊ မမျှတမှုများရှိရာ သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ကာ ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သူလည်းဖြစ်သည်။ တမင်မေ့လျော့စွန့်ပယ်ထားခဲ့ကြသော “ မတရားတဲ့ အမိန့် အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ”ဆိုသည့် ကြွေးကြော်သံကိုကိုင်စွဲကာ အပြောသက်သက်မဟုတ်၊ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ နော်အုန်းလှသည် လက်ပံတောင်းဒေသခံမဟုတ်။ သို့သော်လည်း လက်ပံတောင်းဒေသခံများ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည့် မတရားမှု၊ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမူမှုများကို လက်ပံတောင်းဒေသခံများနှင့်အတူ အရေးကြီးလျှင်၊ သွေးနီးပြီး၊ သွေးစည်းသည်ဆိုသော မူဖြင့် တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းထဲရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် “ဒေသခံမဟုတ်လျှင် ဝင်မပြောနဲ့”...
ကလေးမြို့နယ်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် သွေးချင်းများ (ချမ်းမြေ့ဆရာတော်တရားပွဲနှင့် ဦးမန်ကျင့်ထန်) ဆလိုင်းရွှေလင်း၊ သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကလေးမြို့နယ်သည် စည်ကားထင်ရှားသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၏ တောင်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး၊ ချင်းမျိူးနွယ်စုများစွာ အခြေချနေထိုင်ရာ ဒေသလည်းဖြစ်သည်။ ကလေးမြို့အပါအဝင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၌ ချင်းလူဦးရေ ၁-သိန်းကျော်၏်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ ချင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတစ်ဦးလည်း ရှိသည်။ တီးတိန်၊ ဖလမ်း၊ ဟားခါး၊ ထန်တလန်၊ တွန်းဇံ အစရှိသော ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မျိူးနွယ်စုများစွာသည် ကလေးမြို့နယ်၌ နေထိုင်ကြရာ မြို့လူဦးရေ၏ထက်ဝက်သည် ချင်းလူမျိူးများဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။ ထိုချင်းများစွာသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြရာ၊ အသင်းတော်မျိုးစုံ၊ Church ကျောင်းမျိုးစုံရှိသည်။ တမူးမြို့နယ်သည် အိန္ဒိယနယ်စပ်၌ တည်ရှိပြီး၊ မြို့နယ်၏ လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်သည်လည်း ချင်းမျိုးနွယ်များဖြစ်သည်။ တွန်းဇံဖက်နယ်စပ်ထွက်ပေါက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊...
ဗိုလ်သိန်းစိန်၏ လက်သီးပုန်း သို့မဟုတ် “ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦး” တူမောင်ညို (၂၉ သြဂုတ် ၂၀၁၃) စစ်တပ်ပိုင် “မြဝတီသတင်းစာ” (၂၉ သြဂုတ်) မှာ “ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦး” အမည်နဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုသလိုသုံး ဖို့ ထင်သလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြမည်လား” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး ပါရှိလာပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ပင်မရည်ရွယ်ချက်က သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က အစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော်၊ “ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီ ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ” ကို လက်တုန့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ရွှေမန်းလွှတ်တော်ဂိုဏ်းကို ပီပီပြင်ပြင် အရေလှန်ပြီး ပညာပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် လို့ပြော ရရင်လည်းရတယ်။ “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ”ကို နားမလည်ဘဲ၊ စိတ်ကြိုက်ထင်သလိုမသုံးနဲ့လို့ (နသယ်ကိုဖြတ်ရိုက်ပြီး) ဟန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောရင်...
“ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ရွာလည်ပေတော့မည် တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၇ ) ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်၌ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်သည်(အာဏာရပါတီဖြစ်စေ/အတိုက်အခံပါတီဖြစ်စေ)ပါလီမန်တွင်း/ပါလီမန်ပ၊ လွှတ်တော်တွင်း/ လွတ်တော်ပတိုက်ပွဲ စစ်မျက်နှာ နှစ်ရပ်စလုံး ဖွင့်၍တိုက်ပွဲဝင်ရမည်သာဖြစ်သည်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစည်းဝိုင်းထဲက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်သည် ကြိုးဝိုင်းထဲက လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် သူ၏ကျင်လည် စွာ၊ လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားနိုင်သည့် အဆုတ်အတက်ခြေလှမ်းများနှင့်အညီ ဘယ်/ညာလက်သီးနှစ်လုံးဖြင့် တစ်ဖက်ယှဉ်ပြိုင်သူကို ထိထိမိမိ ထိုးနှက်ရလိမ့်မည်။ အာဏာရပါတီ၏ မူဝါဒ၊ပေါ်လစီများ၊ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များကို အတိုက်အခံပါတီတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ လက်တွေ့နှင့်ရေရှည်အကျိုးစီးပွားဘက်မှရပ်တည်ကာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန်းစစ်၊ထောက်ပြ၊ဝေဖန်၊ဖွင့်ချရလိမ့်မည်။ “၂၀၀၈အခြေခံ ဥပဒေ” စည်းဝိုင်းထဲတွင် မှတ်ပုံတင်ပါတီတစ်ရပ်အတွက် ထိုကဲ့သို့ လွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရှိပါ၏လော။ ထို့အပြင် တစ်ဖက်မှလည်း အာဏာရပါတီ၏ လုပ်ဆောင်မှုများအနက်မှ ပြည်သူ့အကျိုးလက်တွေ့ဖြစ်ထွန်းမှုရှိသော တစ်ခုခြင်း ကိစ္စများ၌ အတူယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ကြရတာမျိုးလည်းရှိပေလိမ့်မည်။ လက်တွေ့၌...
Page 125 of 153«1...123124125126127...153»
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ https://t.co/ObRxphJ1EN https://t.co/VrkyZ0uBjC about 22 hours ago ReplyRetweetFavorite